Ciidamada NISA oo ku shaqeyn doonno qaab ka bedalan sidii hore (DHAGEYSO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Ciidamada NISA oo ku shaqeyn doonno qaab ka bedalan sidii hore (DHAGEYSO)
Wasiirka amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa markii ugu horeeysay ka shanqariyay in ciidamada NISA ay noqon doonaan kuwo ku shaqeeya si qarsoon oo aan la fahmi karin.
Wasiir Ducaale oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay haatan qorsheynayaan inay sameeyaan ciidamo gaar ah oo badeli doonno ciidanka NISA islamarkaana illaaliya amniga magaalada Muqdisho iyo madaxda dalka.
Ciidamada nabad-sugudda Qaranka ee NISA ayuu sheegay in qaabka ay haatan ku shaqeeyaan laga badeli doonno, islamarkaana dib loogu celin doonno qaabkii ay hore ugu shaqeeyn jireen ee ahaa kuwo qaab qarsoon oo dharcad ah.
“Waxaa la sameyn doonnaa ciidamo gaar ah oo ka shaqeyn doonna sugidda amniga magaalada Muqdisho iyo madaxda dalka, kuwaas oo badeli doonno ciidanka NISA, waxayna ciidanka NISA ku shaqeyn doonnaan qaab qarsoodi ah, ma doonayno in NISA calaamad ku buufsan la arko” Sidaas waxaa yiri wasiir Duicaale.
Dhinaca kale, ciidamada nabad-sugidda qaranka ee dowladii uu madaxweynaha ka ahaa Allaha u naxariistee Maxamed Siyaad Barre ayaa ahaa kuwo xogta uruuriya islamarkaana aanay cidna aqoon u laheyn, kuna dhex jiray bulshada qeyb kasta oo ka mid ah, taasoo hadda meesha ka baxday.
Ugu dambeyn, ciidanka sirdoonka Soomaaliya ee NISA ayaa xilligaan noqday kuwa bannaanka yaalla oo ay ka muuqato calaamadaha, waxayna qaarkood la shaqeeyaan maamulada degmooyinka Muqdisho, halka qaarka kale ay yihiin kuwa si caadi ah u hubeysan.